Posted by Iora at 11:27 AM
ဟင်းက မဟုတ်လည်းချက်နေရတော့ ဒါတွေပဲတင်ဖြစ်နေတာရယ်
Iora September 2, 2011 at 12:05 AM
ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်ဆို လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
rose of sharon September 2, 2011 at 1:09 AM
အတွေးကောင်းလေးနဲ့ ရေးထားတာလေး သဘောကျမိတယ်....
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) September 2, 2011 at 3:22 AM
ဘလော်ဂါပွဲဈေးတန်းမှာ ဒေါ်ချောတို့ရဲ့ ဒေသအစားအစာရောင်းတဲ့ဆိုင် မတွေ့ခဲ့ဘူးလား ဒေါ်အိုင်အိုရာ။
ငါးပတ်မွှေဟင်းလေး လာမြည်းဖို့ ဖိတ်ပါတယ်
ပွဲဈေးမှာ လျှောက်လည်လို့ ခြေထောက်ညောင်းရင် လာခဲ့နော်
မြတ်ကြည် September 2, 2011 at 4:08 AM
ညီမရဲ့ ဗျူတီဆလွန်းဆိုင်လေးမှ အစ်မ အိုင်အိုရာကို အမြဲကြိုဆိုလျက်ပါ။ :)
မြစ်ကျိုးအင်း September 2, 2011 at 7:35 AM
ပွဲဈေးထဲ လည်ရင်းနဲ့ ကိုယ့်ဆိုင်လေးလည်း ခင်းပါအုံး။ ပြခန်းလေးလည်း ပြင်ပါအုံးလို့ အားပေးသွားပါတယ်။
Iora September 2, 2011 at 10:32 AM
သဘောကျတယ်ဆုိုလို့ ကျေးဇူးတင် ၀မ်းသာရပါတယ်ရှင်။
သိတယ်မှုတ်လား။ ဒေါ်ချောရဲ့ ဒေသစာတွေစားရုံတင်မက ဒေါ်ချောဖွင့်ထားတဲ့ စာကြည့်တိုက်လေး ကိုလည်းဗဟုသုတတွေရလို့ အမြဲေ၇ာက်ပါတယ်နော်။ ပွဲဈေးလျှောက်တာညောင်းပြီ..လာစားတော့မယ်။း)
ပွဲဈေးဖြစ်မြောက်ရေးကော်မီတီစီက ရီမုိုင်ဒါ လာတယ်လို့ တွေးလိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဒီလိုရေးဖြစ်သွားအောင် စေ့ဆော်မှုပေးတဲ့ ကိုမြစ်ကျိုးအင်းရဲ့ မူလပထမ ဘလော့ဂါပွဲဈေးတန်း(၂) ကုိုဖတ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်။
ဟန်ကြည် September 2, 2011 at 1:19 PM
အခုမှပဲ ရောက်ဖြစ်တော့တယ်...အေးအေးဆေးဆေးမှပဲ စာတွေလာဖတ်ဦးမယ်...လောလောဆယ်တော့ ဆိုဒ်ဘားမှာတွေ့တဲ့ ဟင်းတွေနဲ့တင် လာရကျိုးနပ်သွားပြီ...
ကောင်းမွန်ဝင်း September 2, 2011 at 6:18 PM
ဘလော့ဂါတွေအကြောင်း ဘလော့ဂ်တွေအကြောင်းလေးကို တင်ပြပုံလေးက ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။
အိုင်အိုရာ့ဆိုင်/ပြခန်းကို ခဏခဏလာမယ်နော်။ တခါတလေ မ၀ယ်ပဲနှိုက်စားသွားတယ်။ တခါတလေလည်း ၀င်းဒိုးရှော့ပင်းပဲ။
Iora September 2, 2011 at 7:55 PM
လာလည်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ အချိန်အားရတဲ့အခါ အေးအေးဆေးဆေးလာဖတ်လှဲ့ ပါရှင်။ အစဉ်ကြိုဆုိုပါတယ်။
ဆိုဒ်ဘားက ဟင်းတွေနဲ့ တင်လာရကျိူးနပ်သွားတယ်ဆို လို့ ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်။
ဖတ်ကောင်းတယ်ဆုိုလို့ ကျေးဇူးတင် ၀မ်းသာကြောင်းပါ။
ခဏခဏလာတော့ပျော်တာပေါ့။ မလာရင်လည်း မအားလို့ လို့ ဆိုတာနားလည်ပါတယ်။ သူလည်း တကယ်အိမ်လည်သလို အချိန်ပေးရတာဘဲနော့။
san htun September 2, 2011 at 9:01 PM
ဆိုင် ခင်း ခင်း..မခင်း ခင်း အားပေးမှာပဲ...
Iora September 2, 2011 at 11:38 PM
ဒါဆိုရင်တော့ အမြဲကျေးဇူးတင်နေမှာပါ။း)
ပွဲဈေးတန်းအကြောင်း ရေးထားတာလေး ဖတ်ရင်းတောင် ပျော်လာတယ်။ ဒေါ်အိုင်အိုရာဆိုင်လေး ပိုမိုစည်ကားနေဦးမှာ မြင်သွားပါတယ်ရှင်.. (^^)
ဂငယ် September 3, 2011 at 8:26 PM
ဂငယ်ရဲ့ ပန်းချီနဲ့ဓာတ်ပုံဆိုင်က ကျိုးတိုးကျဲတဲလေးပါ :)
မရဲ့ ဆိုင်ထဲမှာမှစုံနေတာ ခနခနသွားရေလာကျနေရတယ်လေ :D
အသက်သိပ်မကြီးသေးတဲ့လူတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ကြီးပြီလို့ခနခနပြောတတ်တယ်တဲ့ ဟုတ်လား :)
Iora September 3, 2011 at 8:53 PM
ဖတ်ရင်းနဲ့ ပျော်လာတယ်ဆုိုတော့ တော်သေးတာပေါ့။ ဘာတွေရေးနေမှန်းလည်းမသိဘူးဆုိုပြီး မထင်လို့ ။း)
ခုလေးဘဲ ဧည့်ကောင်းဆောင်ကောင်း ရောက်လာခဲ့တယ်လေ။
ချစ်ဖုို့ ကောင်းလိုက်တာလို့ ပြောတာက ချစ်ဖုို့ ကောင်းလိုက်တာ။
အဲဒါဟုတ်ရင်ဟုတ်မယ်။ ဒါပေမဲ့ကြီးတဲ့သူတွေကလည်း ကြီးပြီလို့ ခဏခဏပြောတာတော့သေချာတယ်။း)
puupuu September 4, 2011 at 9:09 PM
မမအိုင်အိုရာရဲ့ ဘလော့ဂါဈေးတန်းလေးဖတ်လိုက်ရတာ အရမ်းပီတိဖြစ်မိ
တယ်။ မမရဲ့အရေးအသားလေးတွေက ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ပူးပူးရဲ့ အထွေထွေစတိုးဆိုင်လေးကလဲ
အမြဲတမ်း ထာဝရကြိုဆိုနေပါမယ်။ ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် မမ။ :)
mstint September 4, 2011 at 10:09 PM
Iora ကိုရှာခဲ့တာကြာပေါ့ ဒီကနေ့မှ ညီလင်းသစ်-ဘလော့ဂ်မှာ တွေ့ခဲ့တယ်။ ဘလော့ဂ်ဂါပွဲဈေးတန်းမှာ ယောင်လည်လည်ဖြစ်နေပုံလေး ဖတ်ရင်းအာရုံမှာ ရုပ်လုံးဖော်သွားတယ်နော်။
ဘလော့ဂ်ဂါတွေအကြောင်းကို ဘယ်တော့ဖတ်ဖတ် ကြည်နူးနေမိတယ်း)
သက်ဝေ September 5, 2011 at 12:40 AM
ဘလော့ဂါ ပွဲဈေးတန်း ကို ပုံဖေါ်ထားတာ သဘောကျမိတယ်...
ပျော်ရွှင်စွာ ဆက်လက် ရေးသား ဝေမျှနိုင်ပါစေ...
Iora September 5, 2011 at 4:50 PM
မမန့် ဖြစ်ပေမဲ့ ခဏခဏရောက်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားဘို့ ကောင်းတယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
နောင်လည်း အားရင်လာလည်ပါလို့ ဖိတ်ပါတယ်။
အုိုင်အိုရာ လည်း ကြိုက်၏မကြိုက်၏မှာ ကွန်မန့် ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တော့မတွေ့ ဘူး။ အုိုင်အိုရာ့မမနဲ့ တူလို့ မကြီးလို့ ခေါ်ပြီး နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။
သဘောကျတယ်ဆုို လို့ ဝမ်းသာကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။
ဆက်လက်ရေးဘို့ တော့တွေးနေတာပါဘဲ။ ပြီးတော့သာ ဘာတွေတင်မှန်းမသိ။း)
ညယံ September 6, 2011 at 12:27 AM
ခရီးသွားနေတာနဲ့ ခုမှဘဲရောက်ဖြစ်တော့တယ်။ အိုင်အိုရာက ဖတ်ကောင်းအောင် တော်တော်ရေးတက်တာ။ ဆုိုင်အတွက် ဓါတ်ပုံရုိုက်နေရင် ဟင်းတွေအေးကုန်တတ်၍ မျက်နှာမညိုအောင် ပြန်အပူပေးရသည်တဲ့ ။ ဟိ :) ဖတ်ပြီးသဘောကျတာ။ ကိုယ်လည်း ဖဘမှာ တင်ချင်ဇောနဲ့ဟိုချိန် ၊ ဒီချိန် နဲ့ စားခါနီး ပြန်နွှေးရတာ အလုပ်တခုကို ဖြစ်လို့ :)
Iora September 6, 2011 at 2:54 PM
ခရီးသွားနေတာလား။ ဒါဆို ဓါတ်ပုံတွေ ပေးကြည့်အုန်းနော်။
ဟင်းတွေဓါတ်ပုံရုိုက်ဘို့ အလင်းရောင်ကောင်းတဲ့နေရာသယ်။ ရုိုက်ပြီးရင် ထမင်းစားမဲ့နေရာကိုပြန်သယ်။ ဟင်းများများချက်လို့ များများရုိုက်ရင် ပုိုအေးသွားတော့ ပိုနွှေးရတယ်။ တခါတခါအဲလို လုပ်ပြီးရင် ပြန်မသယ်ချင်ဘူး။ သိပ်ပျင်းတယ်။း)
Still young,still beautiful,still share delicious dishes and wonderful knowledge.Wishing you many more years as blogger.....:)
Iora September 7, 2011 at 8:19 AM
Oh my gosh..you made my day Gyidaw!
I can't stop smiling after reading your comment. So sweet. You just bring the beautiful and graceful morning. Thanksssssssssssss.
TT Iora (not niece too :D)
subuueain September 8, 2011 at 6:00 AM
ရေးထားတာလေး ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ :)
Iora September 8, 2011 at 8:49 AM
ကော်မန့် ပေးထားတာလေးက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာနော်..
ဈေးသယ်ကြီး ဆန်နီရေ ၊ ဆန်နီကြီးဈေးသယ်လာကြည့်သွားပါတယ်။ စားစရာလေးတွေရောင်းပါဦး။
မြသွေးနီ September 22, 2011 at 2:16 AM
Blog Day ကို ပုံစံတစ်မျိုးလေးနဲ့ ရေးထားတာ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ..။
စာတွေလာဖတ်ဖြစ်နေပေမယ့် ခြေရာတွေ မချန်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အခု blogspot တွေ ပြန်ဖွင့်လိုက်တာမို့ စာတွေလာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
Iora October 29, 2011 at 8:27 PM
အမြန်စားစရာတွေ ရောင်းနေတယ်နော်။း)
အလုပ်များနေလို့ ဘလော့ကို မ၀င်ဖြစ်လို့ စာပြန်မရေးဖြစ်ခဲ့တာ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါနော်။ အားတဲ့အခါ လာလည်ပါလို့ ဖိတ်ပါတယ်ရှင်။